काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ सेयरमूल्य समायोजन गर्दै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता ८१९.२९ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ११०७ रुपैयाँ थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो...
मूल्य समायोजनपछि यी तीन कम्पनीको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि दुई जीवन बीमा कम्पनीसहित तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन–एलआईसी (नेपाल), ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र जानकी फाइनान्सको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता एलआईसीको १९४३.३३ रुपैयाँ, ज्योति लाइफको ६५० रुपैयाँ...
मूल्य समायोजनपछि शिखर इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता शिखर इन्स्योरेन्सको १५५०.७७ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १९८६ रुपैयाँ थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो...
मूल्य समायोजनपछि एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गर्दै एसियन लाइफको प्रतिकित्ता १०५७.६० रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता १३२२ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता प्रिमियर इन्स्योरेन्सको १०६१.७१ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १२१३ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित...
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले नाडेपको सेयरमूल्यमा समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ८६५.८३ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार नाडेपको प्रतिकित्ता १०३९ रुपैयाँ रहेको थियो। अब...
मूल्य समायोजनपछि नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २६१४.२९ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो लघुवित्तको प्रतिकित्ता ३६६० रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित...
मूल्य समायोजनपछि यी दुई फाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि दुईवटा फाइनान्स कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता श्री इन्भेस्टमेन्टको ४४१.९७ रुपैयाँ र गुहेश्वरीको ४५४.४५...
दुई फाइनान्ससहित पाँच कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कसको कति ?
काठमाण्डौ । दुई फाइनान्ससहित ५ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि मल्टीपर्पस फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त र कालिका लघुवित्तको तथा हकप्रद प्रयोजनका लागि छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार...
मूल्य समायोजनपछि सिभिल बैंक र रिलायन्स फाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक र रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयर प्रयोजनका लागि सिभिल बैंक र रिलायन्स फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता सिभिल बैंकको २४५.७१ रुपैयाँ र रिलायन्स फाइनान्सको ४५२.१७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार...
दुई वाणिज्य बैंकसहित ६ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ६ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले हिमालयन बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, मिर्मिरे लघुवित्त, मिथिला लघुवत्त र कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता हिमालयन बैंकको ३९८.७५ रुपैयाँ, सेञ्चुरी बैंकको...
मूल्य समायोजनपछि सिद्धार्थ बैंक, आरएमडीसी लघुवित्त र सेन्ट्रल फाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सिद्धार्थ बैंकसहित ३ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सिद्धार्थ बैंक, आरएमडीसी लघुवित्त र सेन्ट्रल फाइनान्सको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो। मूल्य समायोजनअनुसार प्रतिकित्ता सिद्धार्थ बैंकको ४०६.१३.३३ रुपैयाँ, आरएमसीडी लघुवित्तको ११४३.३३ रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि दुई वाणिज्य बैंकसहित पाँच कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, फरवार्ड लघुवित्त, गुडविल फाइनान्स र हिमालयन डिस्टिलरीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। मूल्य समायोजनअनुसार प्रतिकित्ता नबिल बैंकको १०८५.३३ रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि मञ्जुश्री फाइनान्ससहित ५ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मञ्जुश्री फाइनान्ससहित चिलिमे हाइड्रोपावर, समिट लघुवित्त, इन्फिनिटी लघुवित्त र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेप्सेमा सूचीकृत ३ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, उन्नति सहकार्य लघुवित्त र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। मूल्य समायोजनपछि प्रतिकित्ता मितेरीको ४४३.०७ रुपैयँ, उन्नति सहकार्यको १४८८.४६ रुपैयाँ र पुनर्बीमाको ११०४.७२ रुपैयाँ...
एससीटी र फर्स्ट पेबीच स्मार्ट अन्तरआबद्धताका लागि सम्झौता
लुम्बिनी विकास बैंकका ग्राहकलाई धुलिखेल जिपलाइनमा छुट